IsiNgesi jikelele-Isikolo soLwimi oluPhakathi, iCambridge
Hlangana nesikolo sakho
Iikholeji eziqhelekileyo zesiNgesi iiyure ze-15 ngeveki nganye kusasa ziqala kwi-09: 30 kwaye zigqitywe kwi-13: 00 kunye nekhefu yekhefu kwi-11: 00.
Sisebenzisa iincwadi zekhosi ezahlukeneyo * kunyaka ukususela kwi-Elementary ukuya kwizinga eliphezulu. Kukho amathuba amaninzi ukuba usebenzise ukuthetha kwakho nokuphulaphula kunye nokubhala kwakho, isigama, ukufunda, igrama kunye nokubhala. Nganye iveki ootitshala bakho baya kufaka ulwazi malunga neeklasi kwiboardboard.
NgeMvulo uya kuhlolisisa umsebenzi ukususela ngeveki ngaphambi okanye uthathe uvavanyo lwenyanga lwenyanga. Unokuphinda ufunde isifundo esithile esikhethekileyo njengesiNgesi sePrasal okanye kwiiNkcazo zemihla ngemihla.
Ekupheleni kweveki unethuba lokuvavanya izifundo kwaye unokucela ukuba uqhutywe yenyanga yonyuso kunye nootitshala bakho.
Unokwenza uvavanyo lokusebenza (kuba bafundi bathatha iimviwo ezifana ne-KET, PET, FCE, CAE, CPE okanye IELTS).
Abafundi bexesha elipheleleyo abaye bafunda kwiiveki ze-2 okanye ixesha elide baya kufumana isatifikethi kunye nengxelo ekupheleni kwekhosi yabo.
* Akukho mrhumo kwiincwadi zekhosi ngaphandle kokuba zilahlekile okanye zonakaliswe.
Iikholeji eziqhelekileyo zesiNgesi iiyure ze-15 ngeveki nganye kusasa ziqala kwi-09: 30 kwaye zigqibe kwi-13: 00 kunye...	Funda Okuninzi
Abafundi abanqwenela ukusebenzisa ixesha elide lokufunda isiNgesi banokubhalisa kwi-intensive English course (ii-21 iiyure ngeveki)....	Funda Okuninzi
NGAPHAMBI NEMIBUZO YOKUQALA Unokuqala iSifundo sakho seNtsuku emva kweLwesibini emva kokuba uthathe uvavanyo lokubeka. Ngomso...	Funda Okuninzi
Silungiselela abafundi iimviwo kumanqanaba amanqanaba kunyaka. Ezi mviwo zibekwe yiCambridge Xhosa...	Funda Okuninzi